I-Wholesale Terpenes | Izintengo ezihamba phambili zango-2022
Ikhasi le-Facebook livuleka ewindini elishaIkhasi le-Twitter livuleka ewindini elishaIkhasi le-Linkedin livula ewindini elishaIkhasi le-Instagram livuleka ewindini elishaIkhasi le-YouTube livulwa ewindini elisha
I-Red Emperor ngokuhlanganyela
Imikhiqizo ehamba phambili ye-CBD ne-Delta 8 THC
Thenga i-Delta 8 THC Products
Ngabe iDelta 8 THC isemthethweni esifundazweni sami?
IDelta 8 THC ne-CBD yokuXhumanisa Uhlelo Lokuxhumanisa
Ungayivula Kanjani I-Dispensary Ngamadola Angaphansi Kwama- $ 50
Thenga Imikhiqizo ye-CBD
Amaphilisi we-CBD namaGel Soft
Ukunakekelwa Kwesikhumba se-CBD
Amafutha we-CBD nama-Tinctures
I-CBD Yezilwane Ezifuywayo
Amapeni we-CBD Vape
Ziyini izinzuzo ze-CBD
Izimpendulo Zezokwelapha Ezivela Emhlabeni Wonke Wewebhu Mayelana ne-Delta 8 THC & CBD
Uyini umehluko phakathi kwe-CBD Oil ne-Full Spectrum Oil
I-CBD nesifo sikashukela
I-CBD Yokukhululeka Kwezinhlungu
Isebenza Kanjani i-Red Emperor CBD & Delta 8 THC?
Konke odinga ukukwazi mayelana ne-CBD tincture.
Ukuxhumana Nekhasi Lokwamukela
Ungaqala Kanjani Imikhankaso Yakho Yokubambisana
I-Wholesale CBD & Delta Products
I-Wholesale Delta 8 THC Gummies
I-Wholesale Delta 8 THC Vape Pens
Ilebula Emhlophe & Eyimfihlo Delta 8 THC
Amapeni E-Vape Eningi Alahlwayo e-HHC
Inqwaba ye-HHC Gummies
Inqwaba Yezomthetho ye-Delta 9 THC Gummies
I-Wholesale HHC-0 Distillate
I-Bulk CBG Isolate
YIBA I-B2B CBD UKREDITOR YONKE
I-Wholesale Terpenes Iyathengiswa
Onke ama-terpenes ethu athengisa uketshezi angama-organic, angewona ama-GMO, nama-terpenes ebanga lokudla. Bavela emithonjeni yezitshalo ehlukahlukene emhlabeni jikelele. Ungazisebenzisa ngazodwana ukuze uthole okungcono kakhulu ku-terpene ngayinye, noma uzihlanganise ngezindlela ezihlukene zokuthuthukisa umkhiqizo. Kunama-terpenes amaningi atholakala ku-cannabis nama-wholesale.
Itholakala nge-wholesale terpenes Isolates
I-Delta 3 Carene
I-Dog Walker OG
Amakhukhisi e-Girl scout
Ukushona kwelanga kweSherbet
I-Super Lemon Haze
I-Super Sour Diesel
Ushizi oluhlaza okwesibhakabhaka
IMIPHUMELA YOMPHUMELA WONKE WE-Wholesale we-TERPENE
Kunamathuba angapheli! Buza mayelana nokwakheka ngokwezifiso kanye namaphrofayili omthelela owengeziwe.
UKUNQOBA IMILOMO Pure AMA-TERPENES E-GALO ESINGASE iyathengiswa Itholakala ku-Bulk kanye ne-Wholesale
Manje usungangeza ama-terpenes angempela, athengekayo, futhi asemthethweni ensangu kunoma yikuphi ukwakhiwa komkhiqizo! !
Sinikezela ngekhwalithi engcono kakhulu, ewina umklomelo, etholwe yinsangu kanye nezakhi ze-terpene ezithathwe esitshalweni. Wonke ama-terpenes ethu e-cannabis avela ohlotsheni lwangempela futhi awanawo ama-cannabinoids. Ama-terpenes ethu emvelo avumela amakhasimende ukuthi enze ngokwezifiso Amafomula kawoyela we-CBD. Ama-terpenes ethu athathwe ezitshalweni aphuma kwezinye izitshalo abese ehlanganiswa osokhemisi bethu abanephunga elimnandi ukuze aphindaphinde iphunga lanoma yiluphi uhlobo lwensangu. Ukuphindaphinda uhlobo lwakho oluthandayo ngokunembe kakhudlwana, singeza ngisho nama-flavonoid ahlanzekile wemvelo. Ama-terpenes ethu athathwe ku-cannabis noma esitshalweni angangezwa ku-E-liquid, Tincture, Hemp Oil, ekwakhekeni kukawoyela wensangu ocebile we-CBD. Ungathenga amafomula ethu e-organic terpene ngokuthengisa noma ngobuningi cishe kunoma yiluphi uhlobo.
**Ukutholakala kungase kuhluke ngenxa yezingqinamba zokuhlinzekwa nokufunwa.
Siphinde sithengise i-Pure Food Grade Terpenes, i-Organic Terpenes, kanye ne-Plant Derived Terpenes nge-Bulk noma I-Wholesale. I-Pinene neCamphene nazo ziyatholakala. Kungase kube nokuhluka okuthile ekutholakaleni ngenxa yesidingo kanye nezingqinamba zokuhlinzeka.
I-Terpenes etholakala kuCannabis Iyathengiswa
Ingqikithi ye-cannabis amafutha abalulekile e-cannabis. Lawa makhemikhali e-bio, kanye nama-cannabinoids afana ne-THC ne-CBD, akha amaphrofayili okunambitheka nephunga kulo lonke uhlobo. I-Terpenes, isakhi samakhemikhali esikhulu samafutha abalulekile eCannabis, kube yinkulumo edumile embonini. Ziningi ezinye izinhlobo zamakhemikhali ezinto eziphilayo emafutheni abalulekile anikeza ukunambitheka, iphunga, kanye nemiphumela yezinto eziphilayo. Yize kuningi okwaziwayo ngama-terpenes, ukusetshenziswa kwawo kwezokwelapha nokuzijabulisa, kusekuningi okufanele kufundwe mayelana nokusebenzisana kwamakhemikhali okudala umphumela wokugqugquzela.
Sisebenzisa kuphela ama-terpenes amsulwa, aphilayo, ayiqiniso, futhi asebenzayo. Sinobuchwepheshe obungcono kakhulu bokukhipha nokusebenzisana emhlabeni ukuze sikhiqize i-terpenes ye-cannabis esezingeni eliphakeme kakhulu nesebenza kahle kakhulu.
I-Wholesale Terpenes yethu Ihlukile - Yini imfihlo?
Engazinzi Amafomula ethu e-terpene aphakathi kwezinto ezithengeka kakhulu ezitholakala e-cannabis nezitholakala ezitshalweni ezitholakalayo. Lokhu kungenxa yezindlela zethu zobunikazi zobunikazi, ithimba lokuthola nokuhlanganisa.
I-California & Colorado Sourced - Amafomu ethu e-terpene avela kwezomnotho ezithuthuke kakhulu emhlabeni jikelele, okuvumela ukufinyelela ezinhlobonhlobo ezinhle kakhulu emhlabeni.
Ngokuvumelana Inqubo yethu yobunikazi idala izinhlobo zisebenzisa izingcaphuno zensangu ezicebile, ezibe sezihlaziywa ukuze kutholakale amaphrofayili aziwayo e-Terpene. Lokhu kulawula kuqinisekisa ukuthi yonke inqwaba yezikhishwe ze-cannabis iyahambisana.
Ngempumelelo Sithole impendulo evela kumakhasimende ayizinkulungwane eziningi kuze kube manje ukuthi imikhiqizo yethu inikeza imiphumela esebenzayo nehlangene yokuzijabulisa kanye nemithi uma ihlanganiswa ne-CBD ne-THC.
Okunambithekayo Amaphrofayili ethu amaningi athuthukisiwe anenhlanganisela ye-flavour nephunga elingazange likhishwe kusetshenziswa izindlela zendabuko. Le mikhiqizo ye-terpene ingeminye enambitheka kakhulu etholakalayo.
Pure Ukuhlolwa kwezinkampani zangaphandle kuqinisekisa ukuthi amakhasimende ayaqinisekiswa ukuthi yonke imikhiqizo yenziwe ngezithako zekhwalithi. Izindlela eziningi zokuhlanza zisetshenziselwa ukususa noma yikuphi ukungcola okusele noma ubuthi ngemva kwenqubo yokukhipha.
Transparency Sikholelwa ukuthi ukubeka izinto obala kuwukhiye wemikhiqizo yekhwalithi; umgomo wethu ukuthula kwengqondo. Yonke inqwaba yemikhiqizo yethu ihlolwa yizinkampani zangaphandle futhi ilandela izinqubo ezihamba phambili zomkhakha. Izindinganiso zethu ze-terpene zihlanganisa u-0% we-THC, azikho izibulala-zinambuzane noma Izingcolisi Ezincane, futhi azikho izincibilikisi.
Umholi Ofakazelwe Ama-terpenes ethu athole ukutuswa emhlabeni wonke ngokusebenzisana kwethu okukhethekile nezinhlobo eziningi zepeni likawoyela wensangu eziphezulu. Omunye wozakwethu usanda kuqanjwa njengepeni eliphezulu le-THC le-distillate e-Southern California. Uphinde wawina indawo yokuqala ku-Karma Cup eCanada.
Ubuchwepheshe Obufakazelwe Ama-terpenes ethu akhiqizwa kusetshenziswa ubuchwepheshe be-fractional distillation nezindlela zokuhlanza. Ukulawula nokuvumelana komkhiqizo kungafinyelelwa ngokuhlukaniswa. Sidala kabusha amaphrofayili e-flavour nokusebenza ngempumelelo kwezinhlobo ezaziwayo. Sekukonke, ithimba lethu lokumba linesipiliyoni seminyaka engaphezu kwengama-30 ekukhishweni kwensangu.
Iqhutshwa Isayensi - Umnyombo wobuchwepheshe bethu ukuqonda kwethu i-biochemistry ezingeni layo le-genomic. Umphumela we-entourage uvezwa ngokufunda ikhodi yofuzo yezinhlobo ezisetshenziswa emikhiqizweni yethu. Ngokuhlangene, ithimba lethu linesipiliyoni seminyaka engaphezu kwengu-40 ku-genomic biotechnology futhi lisebenze nabanye abantu banamuhla abavelele ku-genomics.
Ukungafinyeleli Inkundla yethu yobuchwepheshe ingafinyelela kumazinga ezimboni. Lokhu kuzovumela amanani ehle njengoba isidingo semakethe sikhuphuka.
I-Terpenes ebalulekile yeCannabis Wholesale
I-Beta-caryophyllene, i-sesquiterpene, itholakala ezitshalweni eziningi, okuhlanganisa ama-clove, upelepele omnyama, amaqabunga e-sinamoni, ama-clove nama-basilis ase-Thai. Ingatholakala futhi ngamanani amancane ku-lavender. Iphunga layo lingachazwa ngokuthi linongwe, linopelepele, kanye/noma linokhuni. I-Caryophyllene (CB2) ukuphela kwe-terpene eyaziwayo esebenzisana nezinhlelo ze-endocannabinoid. Ucwaningo lukhombisa ukuthi i-b-caryophyllene iyathembisa ezinhlelweni zokwelapha umdlavuza. Ucwaningo lubonise ukuthi i-b-caryophyllene ibopha ngokukhetha isamukeli se-CB2, futhi iyisitha esisebenzayo se-CB2. Ngaphezu kwalokho, i-b-caryophyllene ikhonjwe njenge-CB2 receptor ligand esebenzayo engasebenzisi ingqondo ekudleni futhi njenge-cannabinoid ye-macrocyclic elwa nokuvuvukala.
I-Monoterpene Camphene ikhipha iphunga elimnandi lezinkuni ezimanzi nezinaliti zefir. I-Camphene ingadlala indima ebalulekile ekuvimbeleni isifo senhliziyo nemithambo yegazi. Ukuhlolwa komtholampilo kubonise ukuthi i-camphene yehlisa amazinga e-cholesterol e-plasma kanye ne-triglycerides phakathi kwamagundane e-hyperlipidemic. Lolu cwaningo lunikeza ukuqonda ukuthi kungenzeka yini ukuthi i-camphene isetshenziswe esikhundleni semithi yokwehlisa i-lipid eye yafakazelwa ukuthi idala ukulimala kwesibindi, izinkinga zamathumbu nokuvuvukala. Lokhu kukodwa kudinga uphenyo olwengeziwe.
Isitolo esikhulu seCamphene Terpene
I-Delta-3-carene, i-bicyclic monoterpene, inephunga elimnandi, eliphunga. Ingatholakala emafutheni abalulekile anenzuzo futhi anempilo, njengamafutha omjunipha berry, amafutha enaliti yefir, namafutha omsayiphuresi. I-Delta-3-carene, ekugxilweni okuphezulu ingabangela ukudangala kwesistimu yezinzwa ephakathi. Isetshenziselwa ukomisa uketshezi lomzimba olufana nomjuluko, izinyembezi, namafinyila.
IHumulene, eyaziwa nangokuthi i-humulene noma i-a-caryophyllene, i-sesquiterpene eyi-isomer b-caryophyllene. I-Humulene ingatholakala kuma-hops kanye nezinhlobo ze-cannabis sativa nakwamanye amaphrofayili athengisa kakhulu e-terpene. I-Humulene inikeza ubhiya 'iphunga elimnandi elimnandi. Humulene ine-anti-tumor kanye ne-anti-bacterial properties. Iphinde icindezele isifiso sokudla. IHumulene isetshenziswe ngokuhambisana ne-b-caryophyllene ukwelapha ukuvuvukala. Sekuyisikhathi eside iHumulene isetshenziswa emithini yaseShayina. Isebenza njengesicindezeli sokudla futhi isiza ekwehleni kwesisindo.
I-Linalool, i-monoterpenoid, inezimbali ezimibalabala kanye ne-lavender undertones. I-Linalool iyi-monoterpenoid ekhuthaza imiphumela epholile futhi ephumuzayo. I-Linalool isetshenziswe njengensiza yokulala amakhulu eminyaka. I-Linalool yehlisa ukukhathazeka okubangelwa iTHC emsulwa. Lokhu kwenza kube usizo ekwelapheni kokubili ukukhathazeka kanye ne-psychosis. I-Linalool ingathuthukisa amasosha omzimba, inciphise ukuvuvukala emaphashini futhi ibuyisele ukusebenza kwengqondo nemizwa. Lokhu kwenza kube usizo ekwelapheni isifo i-Alzheimer's.
I-Bulk Limonene Terpene
Ama-monoterpenoid afana ne-limonene ayinhlanganisela ye-monoterpenoid engenye yezinhlanganisela ezimbili eziyinhloko ezenziwe nge-pinene. I-Limonene inamakha aqinile e-citrusy anuka njengolamula, ulamula, namawolintshi. Izinhlobo ezinothe nge-limonene zikhuthaza ukukhushulwa okuphelele kwemizwa, isimo sengqondo, nesimo. Le citrusy terpene, etholakala futhi ku-peppermint, rosemary, juniper, kanye nomjunipha, iyisakhi esiyinhloko sezithelo ezisawolintshi. Ingatholakala futhi emafutheni amaningi enaliti kaphayini. Ukuhogela kuyindlela enhle yokumunca i-Limonene futhi ingena ngokushesha egazini. Ucwaningo lwemitholampilo lukhombisile ukuthi liyasiza ekumunceni amanye ama-terpenes ngesikhumba nangezinye izicubu.
I-Myrcene (ikakhulukazi i-b-myrcene) iyi-monoterpene. Iyona evame ukukhiqizwa i-terpene evela ku-cannabis. Ezinye izinhlobo ziqukethe ngisho no-60% wamafutha abalulekile. Iphunga layo lichazwa ngokuthi i-herbal, musky, ne-earth - efana nama-clove. Amazinga aphezulu e-myrcene ku-cannabis (imvamisa ephakeme kuno-0.5%) aphumela kumphumela owaziwayo "we-couchlock" ezinhlotsheni zasendulo ze-Indica zokwelapha insangu. I-Myrcene ingatholakala emafutheni e-hops nezithelo ze-citrus, amafutha e-eucalyptus noma i-thyme yasendle kanye notshani belamula, amaqabunga e-bay, i-eucalyptus nezinye izindawo eziningi.
Ezinye izitshalo. I-Myrcene iyinhlanganisela yokwelapha enezakhiwo ezikhethekile zethu i-wholesale terpenes. Yehlisa ukumelana nesithiyo sobuchopho begazi. Lokhu kuvumela yona namanye amakhemikhali ukuthi adlule umgoqo kalula futhi ngokushesha.
I-Phellandrene ingachazwa njenge-pepperminty enephunga elithambile le-citrus. I-Phellandrene inezindawo zokwelapha ezikhethekile. Umuthi Wendabuko WaseShayina uwusebenzise ukwelapha izinkinga zokugaya ukudla. Ingenye yezinhlanganisela ezibaluleke kakhulu emafutheni e-turmeric. Lo mafutha asetshenziselwa ukwelapha nokuvimbela izifo ze-fungal zesistimu.
I-Pinene ifana negama layo. Inephunga elimnandi likaphayini, ifir namanye amakha anokhuni. I-Pinene iyi-monoterpene ebaluleke kakhulu ezilwaneni nasezitshalweni. Ihlangana namakhemikhali ukwenza izinhlobonhlobo zama-terpenes nezinye izinhlanganisela. I-Pinene isetshenziswa njenge-expectorant, i-bronchodilator, ne-anti-inflammatory kwezokwelapha. Ucwaningo lomtholampilo lukhombisa ukuthi imiphumela ye-THC ingase inciphe uma ixutshwa ne-pinene.
Ama-monoterpenoid amathathu ahlobene eduze yi-terpinen-4, a-Terpineol kanye ne-4-terpineol. Iphunga le-Terpineol liqhathaniswe nezimbali eziqhakazayo kanye nama-lilac. Amazinga aphezulu e-pinene ku-cannabis angafihla amakha e-Terpineol. I-Terpineol yaziwa ngemiphumela yayo yokuphumula nokuthobisa, ikakhulukazi i-a-terpineol. Ine-anti-malarial, i-AChe inhibitor, kanye nezakhiwo zama-antibiotic.
I-Terpinolene, ingxenye ye-rosemary ne-sage, itholakala emafutheni atholakala eMonterey Cypress. Isetshenziswa kumakha nensipho. Ixosha izinambuzane kahle. I-Terpinolene inephunga likaphayini elinezinto ezicashile zezimbali namakhambi. Inokunambitheka okumnandi okukhumbuza izithelo ezisawolintshi njengamawolintshi nolamula. I-Terpinolene iyisimiso sezinzwa esimaphakathi esicindezelayo esingasetshenziswa ukuyenga ubuthongo, ukozela, noma ukujabula okungokwengqondo nokukhathazeka. I-Terpinolene iphinde yanciphisa ngokuphawulekayo ukubonakaliswa kwephrotheni ye-AKT1 kumaseli e-K562, futhi yavimbela ukukhula kwamaseli okubandakanyeka ezinhlobonhlobo zomdlavuza womuntu.
Imininingwane © 2020 RedEmperorCBD.com | Inikezwe amandla yi IsenseLogic.com